Umkhokheli 'ugweve' nendoda yomuntu | News24
Umkhokheli 'ugweve' nendoda yomuntu
Durban - Usengene kwelikhulu ihlazo umkhokheli webandla leZayoni, eNkanyezini eKing Dinizulu eShowe, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal, osolwa ngokuvalela kubo indoda eshadile, egulayo.
UNkz Pinky Mnqayi, 34, usolwa nguNkk Badelile Xulu, 55, ngokuthatha umyeni wakhe, uMnu Bonginkosi Xulu, 56. UNkk Xulu onomuzi eKing Dinizulu - eduze nakubo kaNkz Mnqayi - uthi umkhokheli akagcinanga nje ngokuvalela umyeni wakhe, kodwa usemfakele nesivimbelo senkantolo sokuthi angakwazi ukusondela lapho emvalele khona.
Uthi umyeni wakhe unemizi emibili kuleli lokishi, omunye wayewuthengele ukuthi kuzohlala inkosikazi yakhe yesibili uma eseyishadile.
Le nkosikazi yesibili athe inguMaBhengu, ihlale isikhathi esincane kulo muzi yawushiya yabuyela kubo eThekwini. "Ngemuva ngokuhamba kukaMaBhengu, uXulu ukhethe ukuyogada umuzi wakhe wesibili ngoba esaba ukuthi kungangena izigebengu zintshontshe impahla ephakathi.
"Emini ubebuya azodla lapha ekhaya ahambe ngoba eseyolala kulo muzi abewugada. Bengingenayo inkinga ngalokho ngoba besivumelene ngakho," kusho uNkk Xulu.
Uthi indaba iqale ngesikhathi umyeni wakhe esethandana noNkz Mnqayi. "Ngiqale ngathuka ngifica le ntombazane emzini womyeni wami, okuthe uma ngiyibuza ukuthi ibekwa yini yankwankwaza. Ngithathe induku ngayiqhuba ngayibuyisela kubo.
"Ngifike ngaphoxeka unina ekhombisa ukungabi nandaba ukuthi indodakazi yakhe eyikholwa ijola nendoda endala kunayo eshadile. Kusukela ngalelo langa, nginqume ukuhlukana phansi nale ngane ngingabe ngisazihlupha ngayo," kusho yena.
Uthi ugcine esezibukela "isikhohlakali somkhokheli sihleli nomyeni wami". Uthi umyeni wakhe ubeyiphoyisa ngaphambi kokuba ahlaselwe wukugula, kwagcina ngokuthi ashiye emsebenzini waphunyelwa yimali yakhe.
Utshele ILANGA ukuthi uNkz Mnqayi akanaso isikhathi sokunakekela umyeni wakhe njengoba egula, kwesinye isikhathi uyamshiya alale yedwa endlini engenakho ukudla ekubeni udla amaphilisi okugula.
"Senginqume ukuthi ngimphakele ukudla ngimhambisele emzini wakhe, amaphilisi awadlayo sengiwathathile ahlala kimina ukuze ngizoba nesiqiniseko sokuthi uwadla ngendlela efanele," kusho uNkk Xulu.
Uthi uNkz Mnqayi uthukuthele wagana unwabu uma ebona ukuthi uyamnakekela umyeni wakhe, wathatha zonke izimpahla ezisemzini womyeni wakhe wabuyela kubo, wamshiya esele yedwa endlini, engenakho ngisho ukudla ekubeni ikhadi lakhe lasebhange lihlala kuyena (uNkz Mnqayi).
"Ngifike kukhona amaphoyisa intombazane ithutha ibuyela kubo yamshiya yedwa uXulu egula. Ngizamile ukumsiza ukuze kubuye izimpahla zakhe kodwa kunalokho le ntombazane isimane yamthatha yayomvalela emjondolo wakubo osemuva kwendlu qede yangivimbela ngencwadi yasenkantolo ukuba ngisondele eduze komyeni wami," kusho yena.
Ukhala ngokuthi umyeni wakhe akasakwazi ukuyogwinya amaphilisi njengoba evalelwe nguNkz Mnqayi. ILANGA linikele kubo kaNkz Mnqayi nebala lafica uMnu Xulu ehleli emjondolo ngemuva kwendlu, isinqandamathe sakhe sisaphumile siyobheka isimo emzini kaXulu abawushiye wodwa. UMnu Xulu uqhamuke emamatheka, exhuga njengoba ehlaselwe yisifo sohlangothi.
Utshele leli phepha ukuthi kube yisinqumo sakhe ukushiya umuzi wakhe wahlala emjondolo wasekhweni. "Ngihleli kahle kwaMqayi nengoduso yami," kusho uMnu Xulu ongazwakali kahle uma ekhuluma ngenxa yesifo sohlangothi.
Kube yisikhathi esincane ILANGA lixoxa noMnu Xulu, wangena uNkz Mnqayi oveze ukuthi uyingoduso yakhe. "UXulu wangilobola waletha nezibizo lapha ekhaya, ngiyingoduso yakhe ngokugcwele. Ngithandane naye ngazi ukuthi ushadile. Ungitshele ukuthi izinto kazihambi kahle emshadweni wakhe, yingakho behlala ngokuhlukana nenkosikazi yakhe ngabe sengiyazithathela yena waba ngowami," kusho uNkz Mnqayi othi kungamampunge okushiwo nguNkk Xulu ngaye.
"Ngibuyele ekhaya ngoba inhlalo ibingaseyinhle emzini kaXulu, sesihlala sixabana waze wangiphakamisela ummsese efuna ukungilimaza. Kudlule izinsuku ezimbili ngimshiyile emzini wakhe uXulu, wangilandela wazocela ukuhlala nami ekhaya," kuchaza uNkz Mqayi oveze ukuthi unezingane ezimbili noMnu Xulu.
Uthi esinye isizathu esimdine emzini kaXulu wukuthi uNkk Xulu ubezicanasela khona. Utshele ILANGA ukuthi uNkk Xulu ubengena ngisho ekamelweni abalala kulona, afike afunze uMnu Xulu ukudla ekhona naye ebe ephekile.
"Ngiyeke umsebenzi ebengiwutholile esifundazweni iMpumalanga ngenxa yokuthi inkosikazi kaXulu inqabile ukuhlala naye imgade. Iyangixaka manje uma isizongifaka emaphepheni izenza umuntu emthandayo. Inkosikazi kaXulu yiyona engifaka umunwe esweni ngibe ngizithulele, ihlulwa wukwamukela ukuthi ngikhona empilweni kaXulu futhi kangiyi ndawo," kusho uNkz Mnqayi.